တရုတ်ပုံနှိပ်စာရွက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Aotian
အရွယ်အစား:A4 (210 * 297mm)
အလေးချိန်260g / m² 300g / m²
ပုံစံOne Fece နှစ်ခုမျက်နှာ
လျှောက်ထား:မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ၊ လက်မှတ်ဓာတ်ပုံ၊ အနုပညာဓာတ်ပုံ၊ နာမည်ကဒ်
Ink-jet print paper ဆိုသည်မှာပုံရိပ်များသို့မဟုတ်စာသားများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော ink-jet printer ၏ nozzle မှလက်ခံသည့်မင်ကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏အခြေခံဝိသေသလက္ခဏာများမှာလျင်မြန်စွာမှင်စုပ်ယူခြင်းနှင့်မင်မှင်ချပ်များပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိခြင်း။ အထူးလိုအပ်ချက်များ။
၁။ ကောင်းမွန်သောမှတ်တမ်း၊ ခိုင်ခံ့သောမှင်စုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းအား၊ မှင်စုပ်ယူနိုင်မှုအမြန်နှုန်း၊ သေးငယ်သောမင်မျက်ရည်ယိုအချင်း၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပုံသဏ္;ာန်;
2.fast recording speed, သိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း, စဉ်ဆက်မပြတ်သေံ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံ;
3. ကောင်းမွန်သောထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ မျက်နှာပြင်တွင်ရေဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ အလင်းဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတို့ရှိသည်။ (၄) အပေါ်ယံလွှာသည်အချို့သောအရှိန်အဟုန်နှင့်ခိုင်ခံ့မှုရှိခြင်း၊ ကုတ်ခြစ်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ စလစ်၏ဒီဂရီကွေး, လမ်းပိုင်းကွေး။
၁။ ကာဗွန်ကြမ်းခင်း - မိုက်ခရွန်စီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်စဉ်၊ တောက်ပမှုနှင့်အဖြူရောင်သည်ရိုးရာစက္ကူအဆင့်သို့ရောက်နိုင်သည်၊ သို့သော်စက္ကူအခြေခံသည်စက္ကူအခြေခံဖြစ်သည်။
2. တိုးချဲ့ခြင်း - Polyene (PVA) ပစ္စည်းကိုအခြေခံစက္ကူပေါ်တွင် Peng Run ပုံစံပုံသဏ္coatingာန်ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
၃။ Micropore နည်းပညာ - ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြု၍ RC coated paper, inorganic- အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုန်မှင်ပုံနှိပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းသည် micropore paper ဟုခေါ်သောဆယ်လူလာ micropore စုပ်ယူမှုနှင့်ဆင်တူသည်။ ရိုးရာစက္ကူကဲ့သို့စက္ကူအခြေခံနှင့်စက္ကူအခြေစိုက်စခန်း။
ဤစာတမ်းသည်စီးပွားရေးကဒ်များပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သည်အတော်အတန်နိမ့်ပြီးစျေးနှုန်းမှာ PVC လောက်မမြင့်ပါ။ ၎င်းကိုသံလိုက်မဟုတ်သောစီးပွားရေးကတ်ပြားများသို့မဟုတ်ကလေးများအတွက်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစက္ကူကဒ်များအဖြစ်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ စက္ကူသည်ခိုင်မာသော၊ ခိုင်မာသည်၊ အလွယ်တကူမပျက်စီးနိုင်ပါ။ ရွေးချယ်ရန်အရောင်မျိုးစုံရှိသည်။
ရှေ့သို့ CRYSTAL ဓာတ်ပုံစက္ကူ
နောက်တစ်ခု: ရွှေနှင့် Sliv PHOTO စက္ကူ
တီရှပ်စက္ကူ, Glossy Photo Sticker Paper, အနက်ရောင်ဓာတ်ပုံစက္ကူ, ဓာတ်ပုံများအတွက်စက္ကူပုံနှိပ်, ရှပ်အင်္ကျီအဘို့သံစက္ကူ, Transparent Transfer Paper,